စစ်ကိုင်း၊ ဇွန် ၂၄ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ယင်းမာပင်ခရိုင်ရှိ စံပယ် တောင်၊ ကြေးစင်တောင်၊ ကြေးနီ စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်နေသော မြန်မာ -ယန်စီကုမ္ပဏီမှ ကြေးနီနှင့် ဆက်စပ်သတ္တုရှာဖွေရေးဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာရန် မြေဧက တစ်သိန်းကျော်တွင် တိုးချဲ့ခွင့်ကို တိုင်းအစိုးရမှ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန် ကြီးဌာနထံ သဘောထားမှတ်ချက် မပေးသေးဘဲ ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးမြင့် ကြည် ကပြောသည်။ ယင်းတိုးချဲ့ဧရိယာ လျှောက် ထားမှုအား ဒေသခံပြည်သူများမှ ကန့်ကွက်နေသည့်အပေါ် တိုင်း ဒေသကြီးအစု...
IN: Business BY: DW 25 Jun, 2019
ပေကျင်း၊ ဇွန် ၂၅ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ် လျှိုဟဲ(Liu He) နှင့် အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ် Robert Lighthizer နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Steven Mnuchin တို့သည် ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စ တယ်လီဖုန်းဖြင့်ပြောဆိုခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
IN: Business BY: M Bwe 25 Jun, 2019
IN: Life BY: ATK 25 Jun, 2019
တွဲကစားဖူးသမျှတွင် ဂျရတ် အကောင်းဆုံးဟု တောရက်စ် ဆို
IN: Sport BY: KKW 25 Jun, 2019
ဘာစီလိုနာတွင် ကစားသင့်ကြောင်း ဆာလက်အား အီတူး အကြံပြု
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း စိုးရိမ်စရာ မရှိကြောင်း တရုတ်ကုမ္ပဏီမှ ပညာရှင်များ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် လာရောက်ပြောဆို
IN: Political BY: TTHL 25 Jun, 2019
ရခိုင်ပြည်နယ် ရှစ်မြို့နယ်တွင် အင်တာနက် ပြန်လည်သုံးစွဲခွင့်ပြုရန် ပြည်နယ်အစိုးရမှ တစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရသို့ တိုက်တွန်းကြောင်း အရေးကြီးအဆို တင်
IN: Political BY: GC 25 Jun, 2019
သမ္မတနှင့် အတိုင်ပင်ခံတို့ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်စရာမလိုဘဲ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိုင်
IN: Political BY: HWA 25 Jun, 2019
၂ဝ၂ဝ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်မှုတွင် ဒေသခံပြည်သူလူထု၏ သဘောထားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဟု ဒီချုပ်ပြောခွင့်ရ ဆို
တပ်မတော်ဆိုတာ လူပုဂ္ဂိုလ်သာပြောင်းချင်ပြောင်းလဲသွားမည်၊ တပ်မတော်က ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲ ပြောင်းလဲ၍လည်းမရဟု တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းညီပြောကြား
ဟားခါး၊ ဇွန် ၂၄ ချင်းပြည်နယ်မြို့ တော် ဟားခါးမြို့ စည်ပင်သာယာ ဧရိယာအတွင်း သတ်မှတ်နေရာ များတွင် အမှိုက်အပစ်ဘဲ စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်ခြင်းများ တွေ့ရှိပါက ဒဏ်ငွေကျပ် နှစ်သိန်း ငွေဒဏ်ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ေ...
IN: Regional BY: DW 25 Jun, 2019
ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီ သုံးပါတီ ပေါင်းစည်းထားသည့် ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီရုံးသစ် ဖွင့်ပွဲနှင့် ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ ကျင်းပ
ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ပစ္စည်းအပါအဝင် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းမှု သိသာစွာကျဆင်း၊ ယမန်ဘဏ္ဍာနှစ် ကာလတူထက် ကန်ဒေါ် လာ ၈၆၃ ဒသမ ၇၂၈ သန်း လျော့ကျခဲ့
လတ်တလောအတွင်း ဘောလုံး သမားဘဝမှ အနားယူသွားသော တိုက်စစ်မှူး ဟောင်း တောရက်စ်က မိမိ၏ကစားသမားဘဝတွင် တွဲကစားဖူးသောအသင်း ဖော်များ၌ ဂျရတ်က အကောင်းဆုံးဖြစ် ကြေ...
ခြောက်နှစ်ကြာ ဝေးကွာနေသော လာလီဂါသို့ မာယော့ကာ တန်းတက်
ရာသီသစ်တွင် ကျောနံပါတ် - ၉ ဂျာစီကို ဂျီဆက်စ် ဝတ်ဆင်မည်
ပေါ့ဘာ ထွက်ခွာသည်ကို ကျန်ကစားသမားများ မြင်တွေ့လိုဟု သတင်းထွက်
ဟာဇက်၏ နေရာကို အစားထိုးနိုင်မည် မဟုတ်ဟု ဒရော့ဘာ သုံးသပ်
IN: World News BY: M Bwe 25 Jun, 2019
ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင် ဝန်ကြီးချုပ် နုတ်ထွက်ပေးရေး သိန်းနှင့်ချီသော လူအုပ်ကြီး ဆန္ဒပြ
အမေရိကန်သမ္မတ ထရန့်ထံမှ အကောင်းမွန်ဆုံး စာတစ်စောင်ကို မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် လက်ခံရရှိ
ဂျာမနီ ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံကို ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာတက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများ ဆန္ဒပြ
ချီလီနိုင်ငံ ကြေးနီမိုင်း အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြ
ဂါဇာအရှေ့ဘက်၌ ပါလက်စတိုင်းနှင့် အစ္စရေးစစ်သားတို့ပဋိပက္ခဖြစ်၊ ပါလက်စတိုင်း ၈၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
အမေရိကန်မြို့ကြီးများတွင် တရားမဝင်ခိုလှုံရောက်ရှိလာသူများပြားနေ ၊ အစိုးရကဥပဒေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်
ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ဆောက်လုပ်ဆဲတိုက်ပြိုကျ၊ သုံးဦးသေ၊ အများအပြားပိမိနေ
အိန္ဒိယ ချင်းနိုင်ပြည်နယ်တွင် မိုးခေါင်၍ ရေတွင်းရေကန်များ ခန်းခြောက်
နိုင်ငံတကာ ယောဂနေ့ကို အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် မိုဒီ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆင်နွှဲ
ဟောင်ကောင်၌ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရာထူးမှဆင်းပေးရေး၊ တရုတ်ပြည်မကြီးသို့ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရေး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်
IN: Entertainment BY: ၀ိုင်နေ 25 Jun, 2019
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၄ ချင်းပြည်နယ်ရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း ခွဲတစ်ခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ဆရာမရှိသြ...
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂ နေပြည်တော် အပါအဝင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ၁၁ ခုရှိ မြို့နယ်နေရာတချို့တွင် ၁၄ နာ...
IN: Life BY: TEEP 25 Jun, 2019
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၄ ယခင်က ဓား ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်ကို မကျေနပ်ရာမှ ပြန်ပေးဆွဲပြီး တွံတေးတူး မြောင်း...
IN: Life BY: WYHW 25 Jun, 2019
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၃ ယခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကို ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၂ဝဝဝ ကျော် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်...
IN: Life BY: ATK 24 Jun, 2019
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၃ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် စုစုပေါင်းလေးခုတွင် ဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာမြှင့်တ...
IN: Life BY: TTMT 24 Jun, 2019
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၃ လူမှုကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေရန် ဓာတ်ပုံနှင့်စာများပါသည့် ပို့စ်တင်...
IN: Life BY: WYHW 24 Jun, 2019
သန့်ရှင်းသော အစိုးရနှင့် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ရန် အဂတိ တားဆီးကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ် ဟုဆို
IN: Others BY: AHO,HWA	25 Jun, 2019
လွှတ်တော်သို့ တင်ပြထားခြင်း မရှိသည့် လုပ်ငန်းခြောက်ခု တိုင်းအစိုးရဖော်ဆောင်မည့် အထဲပါဝင်လာ
IN: Others BY: TTMT 25 Jun, 2019
အောင်ဘာလေထီ ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းခွဲဆုရှင် ဆရာတော် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစေတီသို့ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင် လှူဒါန်း
IN: Others BY: HWA 25 Jun, 2019
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် အကျဉ်းသားစာရင်းကို အစိုးရအဖွဲ့ထံတင်ပြထား ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ရန် ရှိ၊ မရှိ ပြန်ကြားလာခြင်း မရှိသေး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ရွေးချယ်သင့်သည့် တက္ကသိုလ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဟောပြောပွဲပြုလုပ်
သိမ်ဖြူ ၁ဝ၁ လမ်းနှင့် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ၃၁လမ်း (အောက်ဘလောက်)ကို နောက်ဖေးလမ်းကြား ဥယျာဉ်များ ဖော်ဆောင်မည်